पीडित महिला नराम्री भएकोले उनीमाथि बलात्कार हुनै नसक्ने भन्दै अदालतले दोषीलाई छाडिदियो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पीडित महिला नराम्री भएकोले उनीमाथि बलात्कार हुनै नसक्ने भन्दै अदालतले दोषीलाई छाडिदियो
रोम। इटलीको एक अदालतले यौन उत्पीडनका दुई दोषीलाई रिहा गरिदिएको छ । यो निर्णय जुन प्यानलले सुनायो त्यसमा सबै न्यायाधीश महिला थिए । प्यानलले पीडित महिला कुरुप र पुरुषजस्तै देखिने भएकाले उनीमाथि दुष्कर्म हुनै नसक्ने तर्क दिँदै यस्तो निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयविरुद्ध देशभरी प्रदर्शन भइरहेको छ । न्याय मन्त्रालयले निर्णयको अनुसन्धानको आदेश दिएको छ ।
निर्णयविरुद्ध अदालतबाहिर नाराबाजीः
आरोपीलाई रिहा गर्ने निर्णय इटलीको हाइकोर्टले सुनाएको हो । रिसाएका जनताले अदालत बाहिर प्रदर्शन गरे र ‘लाज लाग्दैन’ भन्दै नारा लगाए । घटना सन् २०१५ को हो । एनकोना इलाकाकी पेरुवियन मूलकी महिलाले दुई व्यक्तिमाथि दुष्कर्मको आरोप लगाएकी थिइन् ।
सन् २०१६ मा तल्लो अदालले पेरुवियन मूलका दुई व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सन् २०१७ मा पुनरावेदन अदालतका महिला न्यायाधिसको प्यानलमा पुग्यो । यो कोर्टले तल्लो अदालतको निर्णय उल्ट्यायो । महिला न्यायाधिसको प्यानलले जसलाई दोषी ठहराइएको छ, उनीहरुलाई महिला कुरुप लागेको बताए । पीडित पुरुषजस्ती देखिन्छिन् त्यसकारण उनीमाथि दुष्कर्म हुन नसक्ने उनीहरुको तर्क थियो ।
पीडितकी वकिल सिंजिया मोलीनारोले भनिन्, ‘यस्तो लाग्छ कि प्रतिक्रियामा केही कमीका कारण दोषीलाई छोडिएको छ । पुनरावेदन अदालतको निर्णय अस्विकार्य छ ।’ एक दोषीले आफ्नो बयानमा ती महिला कुरुप भएको र फोनमा उनले उनको नाम लुटेरा भनेर सेभ गरेको बताएका थिए ।